Operating Fitsipiky - Jinghui Environmental Teknolojia Co., Ltd.
Nature fitaovana mahomby indrindra dia amin'ny alalan'ny hihena ny lasa etona ny rano. Evaporative hihena miasa amin'ny fitsipiky ny hafanana hisakana ny fiasan'ireny ny hamandoana lasa etona. Izany ihany koa no mitranga eo amin'ny olombelona hoditra, ny vatana sy ny hatsembohana hampangatsiatsiaka hafanana teo. Ity dingana ity dia mitovy tsapanao ny rivotra mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any, rehefa hatramin'ny ranomasina.
JH evaporative mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any mamokatra hihena mahomby amin'ny alalan'ny dingana natambatra voajanahary-ny rano tamin'ny lasa etona-tsotra, azo antoka rivotra-mampihetsi-po rafitra. Fresh vahiny rivotra dia voasivana amin'ny alalan'ny haino aman-jery ny tototry evaporative, tony ny etona, ary nivezivezy iray blower.
JH evaporative coolers dia mety tsara ho an'ny faritra lehibe kokoa misokatra. Cool faritra midadasika toy ny trano fanatobiana entana, morona amin'ny hetsika ara-panatanjahantena, greenhouses, fivarotana faritra, fivoriambe faritra. Evaporative rafitra hihena manolotra ambany vidiny hafa-ny famerana mari-pana. Easy Ka apetrany amin'ny manda, varavarankely sy ny tampon-trano, tsy vitan'ny hoe manome hihena, fa koa manome rivotra tsara. Simoly izy ireo mampiasa ny anatiny na ny ivelany mba hanome loharanom-baovao rano hihena.